Yedu laser welded diamond blade inogadzirwa nesimbi simbi chisungo neakakwira mangoda grit. Gadzira fomula yakasiyana yedombo rakasiyana. Yakagadzirirwa kukwirira kwekucheka mashandiro uye hwakareba hupenyu hwechishandiso. Inokodzera yemahara yekucheka uye yakaoma yekucheka pane zvakajairika chinangwa zvinhu, masonry zvinhu, dombo uye hasha zvinhu nezvimwewo.
Performance kune mutengi wedu, isu takabudirira mhedzisiro mukucheka kugona pamwe nehupenyu hwese, isu tinogona kudzidza kuumbwa kwechinhu icho chinofanira kushandwa uye nekupa yakanakisa mashandiro edhaimani blade kusangana nezvinodiwa nemutengi.
Mhando yepamusoro-yekuita-laser welded mashizha, epamberi laser yekutengesa tekinoroji uye yakakwira tensile simbi cores inovimbisa kuchengetedzeka uye kucheka kuita. Unhu huripo hwehupfumi-hwakajairwa-premium inogutsa zvakanyanya izvo zvekucheka zvinodiwa.
Tinogona kuita Laser welded nedhaimani chipande hukuru vari mm kubva 105mm - 230mm
1 Kuvimbika kuita uye kukosha
2 Yakagadzirirwa kupfeka kwenguva refu
3 Yekumhanyisa-kumhanyisa kucheka
4 Yakasununguka yekucheka ruzivo
5 Yakakamurwa Mazino, inotonhora hole⇒ inotonhora pasi nekukurumidza, chengetedzo yepamusoro, hupenyu hwakareba hwebasa
* General chinangwa zvinhu
* Yakasimbiswa kongiri
* Masonry uye zvidhinha
* Asphalt uye zvinhu zvinopesana
* Hasha zvinhu
Diameter Chikamu Chikamu
Pashure: Diamond chipande nokuti paburi nokuveza
Zvadaro: Laser welded nedhaimani chipande kuti chidhinha saha